China 37dBm IDEN800 5W Band Selective Repeater orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Kingtone
Fampidirana Mainfeature Application & scenario Fizarana famaritana / Warranty IDEN800 5W Band Selective Repeaters （KT-IRP-B15-P37-B） Ny rafitra Kingtone Repeaters dia natao hamahana ireo olan'ny famantarana finday malemy, izay mora vidy kokoa noho ny manampy base Station vaovao (BTS). Ny fiasan'ny rafitry ny RF Repeaters dia ny fahazoana mari-pamantarana herinaratra ambany avy amin'ny BTS amin'ny alàlan'ny alàlan'ny famindrana onjam-peo ary avy eo alefa any amin'ireo faritra izay tsy ampy ny tambajotra. Ary ny...
IDEN800 5W Band Repeater mifantina （KT-IRP-B15-P37-B）
Mba hanitarana ny fandrakofana famantarana ny faritra feno jamba famantarana izay malemy na tsy misy ny signal. Ivelany: seranam-piaramanidina, faritra fizahan-tany, faritra golf, tonelina, ozinina, distrikan'ny harena ankibon'ny tany, tanàna sns sns toerana fametrahana izay afaka mahazo signal BTS madio amin'ny haavo matanjaka satria ny Rx Level amin'ny tranokala mpamerina dia tokony mihoatra ny -70dBm; Ary afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitokana-monina antena hisorohana ny fanodinkodinan'ny tena.
anarana Hery famoahana-5dB
Fiantohana 1 taona ho an'ny fitaovana 6 volana ho an'ny kojakoja
* Modely: KT-GW20
* Sokajy vokatra: vidiny ambany 2100mhz wcdma repeater finday fampiroboroboana amplificador selular
* Sokajy vokatra: UHF Tetra 400MHz Repeater Fiber Optic Signal Amplifier BDA be mpampiasa amin'ny rafi-pifandraisana
* Modely: KT-DRP-B75-P33-B
* Sokajy vokatra: Repeater Selective 2W DCS1800MHz
* Modely: Baofeng UV-82
* Sokajy vokatra: Baofeng UV-82 vhf uhf tarika roa Ham Radio